သတင်း ကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ရပ်ရွာ ပြင်းထန်သောအားကစား ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ကျန်းမာရေး ဆေးပညာသတင်း, ကျန်းမာရေးပညာရေး
သင် psoriasis များအတွက်ဇီဝဗေဒနှင့်ပတ်သက်။ သိရန်လိုအပ်သမျှ
Psoriasis သည်နာတာရှည်အရေပြားအခြေအနေဖြစ်သည်။ လိမ်းဆေးသို့မဟုတ်နေရောင်ခြည်မကူညီလျှင်ဇီဝဗေဒသည်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီနေရာမှာသိရန်အဘယ်အရာကိုပါပဲ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးနောက်မွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အရာသိနိုင်သနည်း
သန္ဓေတားခြင်းရွေးချယ်စရာများ - သင့်အတွက်ဘာမှန်ပါသလဲ
မွေးကင်းစကလေးထိန်းချုပ်မှုရွေးချယ်စရာများ၊ ဆေးလုံး၊ IUDs၊ implants နှင့်ရိုက်ချက်များအပါအ ၀ င်နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်။ သင့်အတွက်မည်သည့်အရာသည်မှန်ကန်ကြောင်းသိရှိရန်အောင်မြင်မှုနှုန်းနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုလေ့လာပါ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ သူနာပြုလုပ်တဲ့အခါကိုယ်ဝန်ရဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သတင်းကောင်းလား နို့တိုက်နေစဉ်မိခင်နို့တိုက်ကျွေးမှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိသည့်ကလေးမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေးနည်းလမ်းများရှိသည်။
အမျိုးသမီးများသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းထက်အဆ ၅ ဆကျော်ပိုများသောသွေးခဲခြင်းကိုတွေ့ကြုံနိုင်သည်။ သင်ဟာအန္တရာယ်များတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်သိရမလဲလေ့လာပါ။
သွေးပေါင်ချိန်ပမာဏသည် 90/60 နှင့် 120/80 mmHg အကြားရှိသင့်သည်။ ဒီအကွာအဝေးအပြင်ဘက်မှာ? အနိမ့်နှင့်မြင့်မားသောသွေးဖိအားများအတွက်အကြောင်းရင်းများနှင့်ကုသမှုလေ့လာပါ။
Xarelto နှင့်အရက်ကဲ့သို့သောသွေးရည်ကြည်များမပေါင်းသင့်ပါ။ ရှားပါးသောအချိန်များတွင်၊ သွေးရည်နှင့်အရက်တို့ကိုပေါင်းစပ်သော်လည်းကောင်းသည်။
AFib သည်သွေးစီးဆင်းမှုကိုနည်းပါးစေပြီး၊ သွေးပေါင်ချိန်ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ။
စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါစိတ်ကြွရောဂါနှင့်စိတ်ကြွစိတ်ကျရောဂါကွာခြားချက်ကဘာလဲ။ ရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့်နယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါနှင့်စိတ်ကြွစိတ်ကျန်းမာရေးရောဂါတို့၏ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
Bronchitis vs. Pneumonia: အကြောင်းရင်းများ၊ ရောဂါလက္ခဏာများ၊ ကုသမှုများနှင့်အခြားအရာများကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ
အဆုတ်ရောင်နှင့် bronchitis အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။ ရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့် bronchitis နှင့် pneumonia ရောဂါကာကွယ်ခြင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။
မေးရိုး၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်မျက်နှာနာကျင်ခြင်းတို့သည်အချည်းနှီးဖြစ်သောလက္ခဏာများဖြစ်သည်။ သွားများကြိတ်ခြင်းကိုဖြတ်ရန်ခက်ခဲနိုင်သည်၊ သို့သော်ဤနေရာတွင်ကြိုးစားအားထုတ်ရန် ၈ ခုရှိသည်။
ကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းသည်အထူးသဖြင့်သက်တောင့်သက်သာမရှိသော်လည်းရှာဖွေတွေ့ရှိလေလေ၊ ကုသနိုင်လေလေဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများအတွက်ကင်ဆာစစ်ဆေးမှုလိုအပ်သည့်အချိန်ကိုလေ့လာပါ။
အမျိုးသမီးတွေလိုအပ်တဲ့ကင်ဆာစစ်ဆေးမှု ၃ ခု
ကင်ဆာစစ်ဆေးခြင်းသည်အထူးသဖြင့်သက်တောင့်သက်သာမရှိသော်လည်းရှာဖွေတွေ့ရှိလေလေ၊ ကုသနိုင်လေလေဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်စစ်ဆေးမှုလိုအပ်သည့်အခါလေ့လာပါ။
ဆေးဝါးများသည်ကလေးမွေးခြင်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါသလား။ အချို့သောပြည်နယ်များတွင်ဟုတ်ကဲ့။ သငျသညျအဘယ်မှာရှိကလေးမွေးဖွားထိန်းချုပ်မှုရရန်စဉ်းစားနေလျှင်, ဒီဖတ်ပါ။
နှလုံးရပ်တန့်ခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။ ရောဂါလက္ခဏာများ၊ ကုသမှုများနှင့်နှလုံးရပ်တန့်ခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါကာကွယ်ခြင်းတို့ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။